किन ट्रेन यात्रा जर्मनीमा अद्भुत छ | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
घर > ट्रेन यात्रा जर्मनी > किन ट्रेन यात्रा जर्मनीमा अद्भुत छ
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 11/12/2020)
जर्मनीमा भव्य पहाडहरू छन्, सास लिने ग्रामीण इलाका, र कोस्मोपोलिटन शहरहरू जुन त्यहाँ रेलको यात्रा बनाउँदछन् एक मनोहर अनुभव. छन् धेरै शानदार स्थानहरू बर्लिन सहित हेर्नका लागि, म्युनिख, हैम्बर्ग, कोलोन, र फ्रैंकफर्ट, र अरू धेरै. यी हटस्पट र सानो सहर सबै राम्ररी संगठित नमस्ते-गति द्वारा परस्पर छन् रेल प्रणाली. यो जर्मनी मा रेल यात्रा त सजिलो बनाउँछ. यहाँ को लागि हलिडे लागि पुस्तिका छ जर्मनी मा रेल यात्रा तपाईं सबैभन्दा छ सुनिश्चित गर्न रमाइलो यात्रा सम्भव.
विभिन्न रेल उपलब्ध
जर्मन रेल नेटवर्क Deutsche Bahn द्वारा संचालित छ. यो दिन र रात दुवै ओसारपसार गर्न रेल प्रकार को एक नम्बर प्रदान. जर्मनी मा मुख्य रेल नेटवर्क क्षेत्रीय रेल को अप गरेको छ (जस्तै क्षेत्रीय एक्सप्रेस रूपमा) र इन्टरसिटी ट्रेनहरू. सहरी रेल प्रमुख शहर बीच घरेलू र अन्तर्राष्ट्रीय सञ्चालन.
अन्य जस्तै घरेलू उच्च गतिको रेल रूपमा जर्मनी मा यात्रा तालिम तरिकाहरू पनि छन्, द ICE (इंटरसिटी). यो जर्मनी मा सबै भन्दा लोकप्रिय रेल हो, एक उच्च गति मा प्रमुख शहर जडान. यी उच्च गतिको रेल माथि 200mph गर्न को गति मा यात्रा (320 मी / घन्टा).
म जर्मन रेल मा सीट आरक्षण गर्न आवश्यक?
जर्मनीमा ट्रेन यात्राको उत्तम प्रयोग दिनको समयमा हो, छिटो सहरी एक्सप्रेस सहित, सीट आरक्षण आवश्यक छैन. यद्यपि, तपाईं आफ्नो यात्रा योजना छ भने कुनै हानि छ अग्रिम आफ्नो सिट बुकिंग. दृश्यहरु लागि झ्यालको सिट सुरक्षित वा तपाईं अधिकतम सान्त्वना अनुभव सुनिश्चित गर्न आफ्नो सीट चयन.
केही अन्तर्राष्ट्रिय रेल र एकै रातमा मार्गहरू पेरिस रूपमा यस्तो, ब्रसेल्स, भेनिस, वा कोपेनहेगन तपाईं बोर्डिङ अघि आरक्षण छ कि आवश्यक गर्छन्. तपाईंको रेल टिकट बुक गर्न एक ट्रेन सुरक्षित साइट प्रयोग गर्दा, यो तपाईं आरक्षण गर्न आवश्यक छ वा छैन राज्य हुनेछ.
स्टेशन लकर प्रयोग – जर्मनी मा रेल यात्रा
धेरै जसो जर्मन रेलवे स्टेशनहरु को धेरै बैंकहरु छन् आकार को एक किस्म मा लॉकर. यो दुवै सानो समायोजित छ र ठूलो सामान. तपाईं आफ्नो जडान रेल पात अघि एक घण्टा या त छ भने, तपाईंको राख्न सामान लकर मा, पिउनका लागि जाने, वा वरपरको क्षेत्र वरिपरि छोटो देखिए.
हानोवर गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
हानोवर गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
भियना हानोवर गाडिहरु गर्न
कोलोन हानोवर गाडिहरु गर्न
लकर को मूल्य आफ्नो मूल्य निर्धारण. तपाईं सामान लागि कम भण्डारण आवश्यक भएमा यो अर्थ, तपाईं कम र विपरित भुक्तानी गर्नेछ. जर्मनी मा स्टेशन लकर को मूल्य सीमा बीच € 1 छ – €524 घण्टा प्रयोग.
बच्चाहरु निःशुल्क जर्मनी मा यात्रा तालिम गर्न सक्नुहुन्छ
जर्मनी एउटा ठूलो ठाउँ छ परिवार संग यात्रा. जर्मन रेलवे रेल मा, छ वर्ष मुनिका बच्चाहरु कुनै टिकटको आवश्यक संग नि: शुल्क यात्रा गर्छन्. बच्चाहरू भन्दा माथि6तर अन्तर्गत बर्ष 15 पनि निःशुल्क यात्रा एक पटक तिनीहरूले भाडा-तिर्ने वयस्क सँगसँगै छन्.
जर्मनी वरिपरि रेल लिएर सोच? बचत गर्न ट्रेन अनलाइन जानुहोस् हाम्रो सबै विशेष भाडाहरू जाँच गर्न र आफ्नो अर्को साहसिक योजना सुरु गर्न! हामीलाई पालन फेसबुक, twitter, र एक ट्रेन इन्स्टाग्राम पृष्ठ सुरक्षित हाम्रो नवीनतम प्रस्ताव र थप हेर्न!
के तपाइँ तपाइँको साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-germany%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
Deutschebahn	रेल यात्रा	ट्रेन यात्रा सल्लाह	यात्री जर्मन
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा लक्जमबर्ग, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप